Ngaba kufuneka ubeke uphawu kwimidiya yakho ekwabelwana ngayo? | Martech Zone
Sisebenza neenkampani ezininzi zetekhnoloji yokuthengisa ukuphuhlisa umxholo onzulu kunye nophando lwe-infographics, amaphepha amhlophe, iividiyo kunye nezicwangciso zokuthengisa umxholo wonke. Ubukhulu becala, sihlala sizama ukusebenzisa amandla egama labo. Kubalulekile ukuba nelizwi kunye nokubonwayo okunxulunyaniswa nenkampani okanye iimveliso zayo okanye iinkonzo kwizinto abazisasazayo.
Kulula nje, lakho uphawu Ngaba ucinga ukuba ucinga ntoni xa esiva igama lakho. Yiyo yonke into uluntu olucinga ukuba luyayazi malunga negama lakho lophawu lwentengiso-zombini ziyinyani (umz. Iza kwibhokisi ye-robin's-iqanda-luhlaza okwesibhakabhaka), kunye neemvakalelo (umz. Zithandana). Igama lakho lophawu likhona ngokuchanekileyo; abantu banokuyibona. Ilungisiwe. Kodwa uphawu lwakho lukhona kuphela engqondweni yomntu othile. UJerry McLaughlin, Yintoni uBrand, kunjalo?
Ngamanye amaxesha, sikhetha ukuphuma kwigama losasazo losasazo. Rhoqo kuxa sikhula infographics. Imithombo yeendaba ehanjisiweyo enjengamaphepha amhlophe kunye ne-infographics zinethuba elikhulu kakhulu lokwabelwana ngalo kwiindawo. Xa zibonakala njengesibhengezo esinye esikhulu, nangona kunjalo, kubuhlungu amathuba okuba loo mxholo wabelane. Kuya kufuneka unqume ukuba womelele kangakanani ukuthengisa umxholo wakho osasaziweyo kwaye nokuba uya kuwonakalisa amandla alo okwabelwana ngawo.
Njengomzekelo, sisebenze kwifayile ye- uthotho lwee-infographics kuluhlu luka-Angie. Uluhlu luka-Angie lunophawu olomeleleyo noluthembakeleyo ngaphakathi nangaphandle kwewebhu oluthi ukusebenzisa uphawu lwazo kungabinangqondo. Abantu baya kudla ngokwabelana ngomxholo kuba uthembekile kwaye uyabonakala. Jonga a Isikhokelo kuKhathalelo lwamazinyo kwaye Ixesha ngesiKhokelo seXesha kuLondolozo loMhlaba kunye noKhathalelo lwengca. Sisebenzise uluhlu lweempawu zika-Angie, isitayile kunye nelogo kuyo yonke infographics:
Ngamanye amaxesha, sisebenze neenkampani ezazingaziwa kwaye zingenalo uphawu olomeleleyo, ke sigxile kwibali elisemva kwesiqwengana kunokuba uphawu lwenkampani luze ne-infographic eyomeleleyo eyayiphumelele, yabiwa ngokubanzi, kwaye kukhokelele umsebenzisi kwiphepha lokufika apho banokugxila khona kumxholo kunakwinkampani. Side sasebenzisa umxholo weHalloween okoko i-infographic yayibekelwe ixesha ngeHalloween!
Ukugxila kwethu kokugqibela yayikukuhambisa isihloko ngaphandle uphawu olunamandla olunokwenza abapapashi be-Intanethi babe mathidala malunga nokwabelana nge-infographic. Kwaye kuyasebenza!
Okwangoku, ngamanye amaxesha, sityhale uthotho lwee-infographics ezazibhalwe uphawu lwendawo yomthengi kodwa hayi ukubhengeza uphawu. Besifuna uthotho lwe-infographic ukuba sakhe igunya kwimizi-mveliso yabo ngokuzolileyo ukuze abapapashi babelane ngamajelo eendaba kwaye bangaqondi ukuba babenophawu olomeleleyo… kujongeka ngathi bonke banesimbo esifanayo. Nge-infographic nganye, ukuhanjiswa kwandisiwe. Ngelishwa, umthengi (ngempazamo) uphinde wabuya emva kokuba esishiyile kwaye baphulukana nalo lonke umfutho owawakhiwe ngenxa yoko andizukubabonisa.
Kwesi sicwangciso sexesha elide, injongo yethu yayikukuba le nkampani ibonwe njenge Umthombo wobuchule kushishino lwabo. Ngamanye amagama - sisebenzisa infographics ukuya Yakha uphawu lwabo, hayi ukugxila kuyo.
Uyichaza njani imithombo yeendaba yakho ehanjisiweyo inokuba nefuthe elikhulu kubuchule bayo ekwabelwana ngayo. Uphawu olomeleleyo lunokucima abapapashi abakwi-Intanethi- ngaphandle kwamandla evidiyo, i-infographic okanye iphepha elimhlophe. Sihlala sibekwa mihla le kwi-infographics kwishishini lokuthengisa- kwaye sihlala siyala loo mizekelo apho sisibhengezo esikhulu. Abapapashi abafuni ukubhengeza yeyakho, Bafuna ukusebenzisa imithombo yeendaba enkulu oyiphuhlisileyo ukwakha ixabiso kunye nabaphulaphuli babo. Yiba ngabom kubunzulu bophawu olisebenzisayo xa uphuhlisa umxholo wakho.
tags: uhloboinfographics enophawuusasazo lweendabaAmanani entengisoIiVidiyo zeNtengisoengekho uphawuinfographics engaphawulwangaimidiya ekwabelwana ngayowhitepapers